मे 13, 2019 मे 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक	9 Comments गाजा, डा. राम बहादुर बोहरा
गाजा अति उपयोगी औषधि अन्तर्गत पर्दछ । सरकारले यस्ता बस्तुलाई नष्ट गर्ने होइन यसको उत्पादन बढाएर देशको आर्थिक स्तरमा सुधार गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल बाहेक अन्य देशहरूमा गाजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको पाइन्छ तर नेपालमा अझै पनि गाजालाई लागू औषधको रूपमा हेरिन्छ । सरकारले यसको प्रयोग र उत्पादनलाई अपराधको रूपमा हेर्छ र दण्डित गर्छ ।
गाजाको सेवन गर्नेहरूले ओभर डोज खाएर कसैले पनि ज्यान गुमाएका छैनन् । सन् २०१० मा ल्यान्सेटमा प्रकाशित लेख अनुसार ड्रग एक्स्पेर्टले गरेको अध्ययन अनुसार चुरोट र रक्सीको असरभन्दा गाजाको असर तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।
औषधि विज्ञानले गाँजालाई अहिले उपलब्धिमूलक र सहयोगी औषधिका रूपमा लिएको छ । यसलाई विभिन्न प्रायोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘ग्लाउकोमा’ भन्ने आँखा रोग, मुर्छा पर्ने, अनिद्रा, अल्जाइमर्स, शारीरिक पीडा, मृगी र अनिन्द्रा,दम, अपच जस्ता समस्याको उपचारका निम्ति गाँजा उपयोगी देखिन्छ ।
क्यान्सरका सेलहरू मार्न र रक्सी तथा अन्य हानिकारक लागू औषधको लत छुटाउन पनि गाँजा उपयोगी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको मद्दतले अरू थुप्रै किसिमका घातक रोगहरूको उपचार गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा गाँजाले हृदयगति बढाउने, धुवाँले श्वास-प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्ने तथा अन्य सामान्य शारीरिक गतिविधिमा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिदैन । कुनै पनि बस्तुको सेवन बढी गरिन्छ भने त्यसको असर पक्का हुन सक्छ ।
यी उदाहरण दिनुको तात्पर्य हामीले गाजाको नीजि प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हामीले यसका अनगिन्ती फाइदाको सही उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । गाजालाई लागुऔषध अन्तर्गत राखेकाले यसको कानुन पनि कडा पारेको देखिन्छ ।
अध्ययन अनुसार ६ मिलियन मानिस चुरोट सेवनले हरेक साल मर्ने गर्छन् । यही क्रम रहे सन् २०३० सम्म चुरोटको कारणले ६ मिलियन मानिसको ज्यान जान सक्नेछ । त्यस्तै अर्को अध्ययन अनुसार रक्सीको सेवनबाट संसारमा २.५ मिलियन भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । तर गाजा सेवनबाट अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको सुनिएको छैन ।
बदलिदो समय अनुसार गाजामा लगाइने कानुनलाई बदल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो बहुमुल्य औषधि बनाएर आर्थिक स्तरमा सुधार गर्न यसको खेती गरेर औषधि उत्पादन गराउन सके ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ ।
एकजना विदेशी नागरिकले भनेका थिए, नेपालमा भएको अमूल्य गाजा खेतीको सही प्रयोगले नेपाल एसियाको स्विट्जरल्यान्ड बन्न सक्छ । समयसँगै गाजाप्रति संसारको सोचाइ परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा नेपालले पनि यस सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाएर यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ र यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
← फेसबुकको नसा र उपयोगिता
टाइफाइड र यसको उपचार →
9 thoughts on “गाजा र यसको उपयोगिता”
Pingback:मानिसहरुले किन लागुऔषध सेवन गर्छन् ?
Pingback:गाजा नष्ट नगरी औषधि बनाएर देशलाई समुन्नत बनाउन जुटौं